Ny valan'aretina Ebola any Kongo izay miteraka vonjy maika amin'ny fahasalamana manerantany
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny valan'aretina Ebola any Kongo izay miteraka vonjy maika amin'ny fahasalamana manerantany
Na dia nijanona kely aza ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) nilaza fa tokony hakatona ny sisintany, amin'ny filazany fa tsy dia avo ny fihanaky ny Ebola any ivelan'ny faritra, dia nambaran'ny fikambanana kosa fa misy ny voka-dratsin'ny aretina any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo fa vonjy taitra ho an'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanahiana iraisam-pirenena. (PHEIC).
Ny Lehiben'ny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dia nilaza fa tsy tokony hisy ferana ny fivezivezena na ny varotra, ary tsy tokony hisy ny fisavana ny mpandeha amin'ny seranana na seranam-piaramanidina ivelan'ny faritra akaiky. Nilaza anefa ny fikambanana fa “avo dia avo” ny loza ateraky ny firenena mifanila aminy. Olona roa no maty tany Oganda noho ny Ebola - zazalahy kely 5 taona sy renibeny 50 taona, ary tany Goma, pretra iray no matin'ny virus. Goma dia maneho toe-javatra mampatahotra indrindra amin'ny olona an-tapitrisany monina ao ary ny tanàna no foiben'ny fitaterana lehibe eo amin'ny sisintanin'ny DR Congo-Rwanda.
Ny PHEIC no avo indrindra amin'ny alarme izay ampiasain'ny WHO ary efa in-4 monja no navoaka, anisan'izany ny valan'aretina Ebola izay namono maherin'ny 11,000 tany Afrika Andrefana tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2016. Ny virus Ebola dia miteraka tazo tampoka, fahalemena mafy, fanaintainan'ny hozatra ary fanaintainana tenda izay mivoatra amin'ny fandoavana, fivalanana ary ny rà mandriaka anatiny sy ivelany, ary ireo izay maty dia resin'ny tsy fahampian-drano sy ny tsy fahombiazan'ny taova maro. Ny areti-mifindra dia miparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisany mivantana amin'ny tsiranoka amin'ny vatana, ny ra, ny diky, na ny mandoa avy amin'ny olona iray voan'ny hoditra tapaka, ny vava ary ny orona.
Nanomboka ny volana Aogositra 2018 ny valanaretina ary misy fiatraikany amin'ny faritany 2 ao amin'ny DR Congo - Kivu Avaratra sy Ituri. Amin'ireo olona maherin'ny 2,500 dia voa, ny roa ampahatelony amin'izy ireo dia maty. Tao anatin'ny 224 andro dia nahatratra 1,000 ny isan'ny tranga ary tao anatin'ny 71 andro monja taorian'io dia nitombo 2,000 ny isany. Tranga vaovao 12 eo ho eo no voatatitra isan'andro.
Vaksinina iray novolavolaina nandritry ny fiparitahan'i Afrika Andrefana ary mahomby 99 isan-jato nefa ampiasain'ireo izay nifandray mivantana tamin'ny mararin'ny Ebola ihany. Hatreto dia olona 161,000 198 no vita vaksiny. Amin'ireo mpiasan'ny fahasalamana manompo ireo marary Ebola dia 7 no voan'ny aretina hatramin'ny fiandohan'ity taona ity izay XNUMX tamin'izy ireo no maty.
Tranga marobe no tonga tampoka satria toa ireo tranga ireo dia tsy nifandray tamin'olona voan'ny Ebola ireo olona ireo. Ankoatr'izay, ny fanarahana ny fiparitahan'ny viriosy dia sarotra noho ny tsy fahatokisan'ny mpiasan'ny fahasalamana ka ny ampahatelon'ireo izay voany dia tsy nangataka fanampiana ara-pitsaboana sy maty teo amin'ny fiarahamonin'izy ireo. Vokatr'izany dia miparitaka mora foana amin'ny vady aman-tanàna sy mpifanolobodirindrina aminy ilay viriosy.
Nanazava ny OMS fa tsy manam-bola ampy hiadiana amin'ny valanaretina izy ireo. 98 tapitrisa dolara eo ho eo no ilaina mba hiatrehana ny fihanaky ny aretina hatramin'ny febroary ka hatramin'ny jolay. 54 tapitrisa dolara ny tsy fahampiana.
Lanitra Misokatra: Izay lazain'ny US Travel
Serivisy United Airlines manohy ny serivisy eo anelanelan'ny New York / Newark sy Delhi ary Mumbai